Sida Loo Fiiriyo Meheraddaada, Goobtaada, iyo Abkaaga ee loogu talagalay Raadinta Apple | Martech Zone
Warka ku saabsan Apple ayaa kor u kacaya dadaalka mashiinka raadinta waa war farxad leh fekerkeyga. Waxaan marwalba rajaynayay in Microsoft ay la tartami karto Google… waana ka xumaaday in Bing aysan waligeed gaarin meel tartan ah. Iyaga oo wata qalabkooda gaarka ah iyo biraawsar gundhig ah, waxaad u maleyneysaa inay la wareegi karaan suuq badan. Ma hubo sababta aysan u haysan laakiin Google ayaa gabi ahaanba suuqa ku haysta 92.27% wadaagga suuqaIyo Bing waxay leedahay kaliya 2.83%.
Anigu waxaan ahay nin Apple fanboy ah muddo toban sano ah, waxaan ugu mahadcelinayaa saaxiib wanaagsan oo I iibsaday mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee AppleTV. Markii shirkadda softiweeriga ah ee aan u shaqeeynayay ay dooneysay korsashada Apple, aniga (iyo saaxiibkey Bill) halkaasoo ah labada qof ee ugu horreeya shirkadda inay adeegsadaan laptops-ka Mac. Dib uma eegin. Dadka intiisa badan waan ogahay in Apple dhaleeceyneyso ay diiradda saari doonaan badeecad gaar ah oo seegi doonta sawirka weyn Apple nidaamka deegaanka ee Apple. Markaad isticmaaleyso alaabooyin kala duwan oo Apple ah gurigaaga ama shaqadaada, khibrada aan xadka lahayn, is dhex galka, iyo adeegsiga guud ahaanba waa mid aan lala simin. Mana ahan wax ay Google iyo Microsoft la tartami karaan.
Awoodda Apple si ay u kordhiso saxnaanta natiijooyinkeyga raadinta iyadoo ku saleysan tayda iTunes, AppleTV, iPhone, Apple Pay, Mobile App, Safari, Apple Watch, MacBook Pro, iyo Siri adeegsiga - oo dhammaantood ku wada xiran hal koonto Apple ah - waxay noqon doontaa mid aan lala simin. In kasta oo Google uu diiradda saarayo dibedda tilmaamayaasha… Apple waxay ka faa’iideysan kartaa isla xogta, laakiin markaa waxay isku dareysaa natiijooyinka iyo dabeecadaha macaamiishooda si ay u wado bartilmaameed aad u fiican iyo shakhsi ahaaneed.
Mashiinka Raadinta Apple horay ayuu u noolaa
Waxaa muhiim ah in la sheego in mashiinka wax raadinta ee Apple uusan hadda aheyn xan. Iyadoo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee nidaamka hawlgalka Apple, Apple Barta bartamaha waxay bixisaa baaritaanno internet ah oo si toos ah u soo bandhigaya bogagga internetka - iyadoon la adeegsan mashiinka wax raadinta dibadda.
Apple dhab ahaantii waxay xaqiijisay inay gurguuratay mareegaha sanadkii 2015. In kasta oo uusan jirin mashiin raadinta ku saleysan biraawsarka, Apple waxay ahayd inay bilawdo dhismaha barxadda si kor loogu qaado Siri - kaaliyeheeda dalxiiska. Siri waa qayb ka mid ah macruufka, iPadOS, watchOS, macOS, iyo tvOS nidaamyada hawlgalka adoo adeegsanaya su'aalaha codka, xakamaynta ku saleysan tilmaamaha, raadinta diiradda, iyo isdhexgalka isticmaalaha luqadda dabiiciga ah si looga jawaabo su'aalaha, loo sameeyo talooyinka, loona sameeyo ficilada
Awoodda Siri waa inay la qabsato adeegsadayaasha adeegsigooda luqad gaar ah, raadinta, iyo dookhyada, iyadoo la adeegsanayo sii wadista. Natiijo kasta oo la soo celiyo waa mid shaqsiyeed.
Waxaad u adeegsan kartaa faylkaaga 'Robots.txt' si aad u caddeyso sida aad u jeceshahay Applebot inay u muujiso bartaada:
Qaybaha Darajada Apple Search
Waxaa jira tilmaamo tan horey u daabacday Apple. Apple waxay qaadatay heerarka mashiinka raadinta waxayna daabacday dulmarkaan aan caddayn ee waxyaabaha darajadiisa kujira ee bogga taageerada ee loogu talagalay Applebot gurguurto:
Isugeyn ka qaybgalka isticmaalaha natiijooyinka raadinta
Ku xirnaanshaha iyo iswaafajinta ereyada raadinta mawduucyada bogga iyo waxyaabaha ku jira
Tirada iyo tayada xiriiriyeyaasha bogagga kale ee shabakadda
User calaamadaha goobta ku saleysan (xogta qiyaas ahaan)
Sifooyinka naqshadeynta websaydhka
Kaqeybgalka isticmaalaha iyo dejinta ayaa siin doona tan oo fursado Apple ah. Ballanqaadka Apple ee asturnaanta isticmaalaha ayaa hubin doonta heer ka-qaybgal aan ka dhigayn kuwa isticmaala inay ku raaxaystaan.
Websaydh ku-hagaajinta App
Waxaa laga yaabaa in fursadda ugu weyni ay la jiri doonto shirkadaha bixiya labada barnaamij ee mobilada oo ay weheliyaan websaydh. Qalabka Apple ee isku xidhka websaydhka iyo codsiyada macruufka ayaa aad u fiican. Waxaa jira dhowr dariiqo oo shirkadaha leh barnaamijyada iPhone ay uga faa'iideysan karaan tan:
Xiriirinta Universal. Adeegso xiriiriyeyaal caalami ah si aad ugu beddesho nidaamyada gaarka ah ee URL qaababka HTTP ama HTTPS. Xiriiriyaha Universal wuxuu u shaqeeyaa dhammaan isticmaaleyaasha: Haddii isticmaalayaasha ay ku rakiban yihiin abkaaga, xiriiriyehu wuxuu toos ugu qaadaa barnaamijkaaga; haddii aysan barnaamijkaaga rakibin, xiriiriyaha wuxuu furayaa boggaaga Safari. Si aad u baratid sida loo isticmaalo iskuxirayaasha caalamiga ah, eeg Taageer Xiriirinta Universal.
Calaamadaha Smart App. Markay isticmaaleyaashu booqdaan boggaaga Safari, Banner Smart App ah ayaa u oggolaanaya inay furaan barnaamijkaaga (haddii la rakibo) ama ay fursad u helaan inay kala soo baxaan barnaamijkaaga (haddii aanu rakibnayn). Si aad wax badan uga barato Boodhadhka Smart App, eeg Ku dhiirrigelinta barnaamijyada leh Calaamadaha Smart App.
Gacanta ka qaad. Handoff wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay sii wadaan waxqabadka hal qalab illaa mid kale. Tusaale ahaan, markaad ka baareysid degel ku yaal Mac-kooda, waxay si toos ah ugu boodi karaan barnaamijkaaga hooyo ee iPad-kooda. IOS 9 iyo wixii ka dambeeya, Handoff waxaa ku jira taageero gaar ah oo loogu talagalay raadinta barnaamijka. Si aad waxbadan uga barato taageerida Handoff, eeg Tilmaan -bixiyaha Barnaamij -gacmeedka.
Goobaha Mashruuca 'Schema.org'
Apple waxay qaadatay heerarka mashiinka raadinta sida faylasha robot.txt iyo calaamadeynta tusmada. Muhiimad ahaan, Apple ayaa sidoo kale qaadatay Schema.org Heerarka googoynta hodanka ah ee loogu daro metadata bartaada, oo ay kujiraan Qiimaynta Wadarta, Bixinta, Qiimaha Qiimaha, InteractionCount, Urur, Recipe, SearchAction, iyo ImageObject.
Dhamaan matoorada raadinta hel, gurguurto, oo tus tusmadaada si la mid ah, markaa ka faa'iideysiga hababka ugu wanaagsan ee lagu hirgelinayo nidaamka maareynta maaddadaada ama barxadda ganacsiga waa muhiim. Intaa waxaa sii dheer, in kastoo, hagaajinta bartaada iyo barnaamijka moobiilka oo la isku daro ay tahay inay si weyn u wanaajiso awooddaada laga heli karo mashiinka raadinta Apple.
Ku diiwaangeli Meheraddaada Khariidadaha Khariidadda Apple ee Isku xidhka
Ma leedahay meel tafaariiqle ah ama xafiis macaamiisha gobolku ugu baahan yihiin inay ku helaan? Haddii aad sameyso, hubi inaad isdiiwaangaliso Khariidadaha Khariidadda Apple adoo adeegsanaya soo galida Apple. Tani kaliya meheraddaada kuma saareyso Khariidadda Apple oo waxay ka dhigeysaa tilmaamaha mid sahlan, waxay sidoo kale la midoobaysaa Siri. Iyo, dabcan, waad ku dari kartaa inaad aqbasho iyo inkale Apple Pay.
Sida loo hubiyo bartaada Apple
Apple waxay bixisaa a qalab fudud si loo ogaado haddii bartaada internetka la soo koobi karo oo ay leedahay astaamo aasaasi ah oo lagu ogaanayo. Boggeyga, waxay ku celisay cinwaanka, sharaxaadda, sawirka, astaanta taabashada, waqtiga daabacaadda, iyo faylka robots.txt. Sababtoo ah ma haysto barnaamij mobilo ah, waxay kaloo igu soo celisay inaanan lahayn wax barnaamij ah oo la xidhiidha:
Ku ansaxi bartaada Apple
Waxaan rajeynayaa in Apple ay bixiso baadi goob loogu talagalay ganacsiyada si ay ula socdaan uguna fiicnaadaan joogitaankooda natiijooyinka raadinta Apple. Hadday bixin karaan qaar ka mid ah cabbirada waxqabadka Siri Voice, way ka sii fiicnaan lahayd.
Rajo kama qabo sida Apple u ixtiraamto asturnaanta in ka badan Google… laakiin qalab kasta oo ka caawiya ganacsiyada hagaajinta muuqaalkooda waa la qadarin doonaa!
Tags: tufaaxatufaax botkhariidadaha tufaaxaKhariidadaha Apple ayaa isku xiratufaax payraadinta tufaaxamatoorka raadinta tufaaxawatch appletufaaxtufaaxmacruufkaiphoneiTunesapp mobilesafariraadinta codka